Kusoo Dhowaada Taariikh Nololeedka Super Star Vinod Khanna Oo Dhameystiran (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Taariikhaha » Kusoo Dhowaada Taariikh Nololeedka Super Star Vinod Khanna Oo Dhameystiran (+Sawiro)
Kusoo Dhowaada Taariikh Nololeedka Super Star Vinod Khanna Oo Dhameystiran (+Sawiro)
Waxaa Qoray: Aadan Muriidi
Taariikhda: September 8, 2017
Vinod Khanna wuxuu dhashtay 6 Oct 1946, wuxuu ahaa atoore iyo qarash gareye aflaamta Bollywoodka.
sido kale wuxuu xidigaan ku luglahaa Siyaasada oo wuxuu ahaa xubin katrisan Barlamanka intii u dhaxeysay 1998-2009, hadana mar kale ayaa la doortay 2014-2017.
waxaa xusid mudam in sanadii 2002 uu noqday wasiirka u qaabilsan Dalxiiska ee dowlada India, Khanna wuxuu aflaamta kasoo ciyaaray doorar kala duwan.
aflaamtiisa laga xasuusan doono xidigaan waxaa kamid ah Mere Apne, Mera Goan Mer Desh, Gaddaar, Muqaddar Ka Sikandar Qurbaani, Dayavan iyo kuwa kaloo badan.
wuxuu tiro 2 jeer ah u guuleystay abaal marinta atooraha ugu fiican oo ay bixiso shirkada Filmfareka, sido kale shirkadaan sanadkii 1999 waxay gudoonsisay xidigaan abaal marinta Lifetime Achievemnet.
Bilawgii Noloshiisa Iyo Marxaladaha Usoo Maray Xidigaan:
Khanna wuxuu kadhashtay Famil Punjabi ah Aabihiis Kishanchand Khanna wuxuu ahaan jiray nin ganacsade ah oo ka ganacsada waxyaabaha Chemical ka ah.
wuxuu dunida kusoo biiray taariikhda markee aheyd 6 Oct 1946 asoo kudhashtay Peshawar oo hada Pakistan ka tirsan balse waaga India ka tirsaned xiligii gumeysiga.
Khanna waxaa la dhashteen 3 gabdhood iyo 1 wiil, kadib markee India midowday ayee Khanna reerkisa oodhan usoo guuren magaalada Mumbai.
wuxuu wax kasoo bartay iskuul kuyaala Mumbai ilaa Classka 2-aad waxaana loo bedelay Delhi maadama Familka halkaas u guuren hadana.
sanadkii 1960 ayee qoyska hadana Mumbai dib ugu soo laabteen halkaasu Khanna si toos ah waxbarashadia ugu dhameystay ilaa markii dambe College kuyaala Mumbau uu kaga qalin jabiyo Commerce Degree Sydenham College.
xidigaan yaraantisa wuxuu aad u jeclaan jiray inaa daawado amaba aqrito sheekoyinka Mughal-e-Azam Iyo Solva Saal.
Vinod Khanna Iyo Xiligii Uu Fanka kusoo Biiray Atoore na Noqday:
Vinod Khanna filimkiisa ugu horeeyay ee uu kasoo muuqdo wuxuu ahaa Man Ka Meet kaasoo uu iskalahaa Sunil Dutt, Sunil walalkiisa Som Dutt ayaa filimkaan larabay inuu magac ku yeeshto balse Vinod Khanna ayaa doorkiisa aad loogu amaanay ee laadarnimada ahaa.
kadib markuu filimkaan caan ku noqday ayuu wuxuu bilaway inuu sameeyo aflaam uu door laadirnimo kaga soo muuqdo iyo door atoore caawiye ah.
wuxuu kamid ahaa atoorayasha ugu quruxda badan ee abid India oodhan soomarta sidaa awgeed xirfadiisa fanka aad ayaa loola dhacay waxaana la bilaway in filimaan asiga lagu aamino.
xidigaan markuu noqday atoore isku filan filimna kaligiis gadi kara ayaa wuxuu hogaamiye ka noqday filimkiisi ugu horeyay ee Hum Tum Aur Woh kaaso la daawaday sanadkii 1971.
inaba caadi ma ahan Mastana qaab jiliinkiisa cajiibka ahaa wuxuuna noqday xidig laga daba dhaco taagerayaal badana yeeshta asigoo ku muteystay xaragadiisa badan, qaab jiliin cajiib ah iyo nin aqiyaarnimo dabcigiisa ahaa.
wuxuu sameyay Doorar kala duwan asigoo xiligaas tartan culus kula jiray dhanka Actionka xidigaha kala ah Amitabh bachchan, Dharmendra, Jeetendra, iyo Shatrughan Sinha.
Vinod iyo Big B waxay wada sameyeen aflaam taariikhi ah kuwaaso guulo waaweyn gaaren, waxaa kamid ah aflaamta ay wada sameyeen Amar Akbar Anthony, Muqaddar Ka Sikandar, Parvarish iyo kuwa kale.
Khanna Iyo Markuu fanka India oo dhan awood ku qabsan rabay iyo siduu oga baxay fanka:
kadib markii xidigaan aflaamtisa inta badan guulesteen doorar kala duwana kaga soo muuqday, ayuu hadana sanadkii 1982 la yimid filimkiisi oo uu dunida oo dhan kaga yaabsaday Qurbani.
Qurbani waxay ku midoween saaxiibkiisa Feroz Khan kaaso ay isla wadeen filimka, filimkaan wuxuu noqday filim taariikhi ah guulo lixaad lehna wuu sameyay shacbiyad balaarana wuu kuhelay Mastana.
sidaa awged Power Star of india ayaa loo aqoon sanrabay balse si kadis ah ayuu fanka oodhan kaga baxay xidigaan asigoo dalka marekanka aaday qolo diimo dhaqameed ah ayuuna ku biiray.
asigoo fanka iyo familkiisaba isaga tegey mudo 5 sano ah ayuuna halkaas kumaqnaa, kadib 5 sano ayuu soo labtay asigoo wali aanan laga xiiso dhicin wuxuuna la yimid filimkii Insaaf kaaso ay la hogaamineysay Dimple Kapadia.
markale ayee midowen saaxiibkiisa Feroz Khan waxayna la yimaaden Blockbuster kale Dayavan sanadkii 1988 waxaana filimkaan Director iyo qarash gareyaba ka ahaa Feroz Khan.
bilawgii 90kii iyo dhamaadkii 80kii wuxuu kasoo muuqday aflaam uu door caawiye ah ku lahaa iyo aflaam uu aabo nimo kujilaayey.
sanadkii 1997 ayuu sitoos ah u galay Siyaasada asigoo halkaas ku helay Kursiga Barlamanka waxaana laga soo doortay degmada Gurdaspur ee katirsan Punjab oo uu asal ahaan asiga kasoo jeeday.
sidaa awgeed bilawgii qarnigaan xidigaan aflaamtisa wey yaraatay maadama uu xooga saaray siyaasada, waxaana sanadkii 2002 loo doortay wasiirka dalxiiska.
xidigaan 2009 wuu ku guuldarestay doorashadii guud ee kadhaceysay dalka balse wuxuu markale kursigiisa ku guuleystay sanadkii 2014.
Vinod Khanna Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Vinod xaaskisa koowad Gitanjali waxay isku barteen College uu dhigan jiray yaraantisa waxayna noqotay xidig markii dambe, hadaba xaaskisa koowad wuxuu guursaday 1971 waxayna udhashay labada atoore ee kala ah Akshaye Khanna iyo Rahul khanna.
hadaba xaaskisa koowaad wey kala tageen xidigaan maadama uu isaga tegey oo dayacay sanadkii 1982 asigoo ku biiray koox diimed oo uu aaminsana asiga waliba wuxuu aaday marekanka halkasu uu ku noqday wadaad diimed diintisa isku dhiibay.
Sida awgeed waxay u keentay arinkaa inuu Bollywoodka awoodi uu ku qabsan lahaana ku waayo xaaskiisana ay kala tagaan, hadaba Bollywoodka wuu kusoo laabtay balse xaaskia ayuu ku waayey.
Sida awged 1990 ayuu xaaskisa labaad guursaday ee ah Kavita Daftray ayadoo udhashay wiil iyo gabar lagu kala magacaabo Sakshi iyo Shraddha.
Khanna waxaa isbitaal la dhigay 31 March ee sanadkaan kadib markii u fuuq bax kudhacay, mudo ayuuna kujiray isbitaalka N Reliance Foundation and Research.
taariikhda markee aheyd 27 Apr galinka hore ayee ugu dambeen nafta kaga baxday isbitaalka dhexdiisa isagoo da’diisu ay tahay 70 jir maadama uu hayey cudurka Cancerka oo kaga dhacay kaadi heysta.
Ugu dambeyn shalay galinka dambe ayaa lagu gubay Mumbai waxaana kasoo qeybgaleen aaskisa xidigaha ay kamdi yihiin Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, Randhir Kapoor, Dia Mirza, Jackie Shroff, Arjun Rampal iyo kuwa kale.
Legend Vinod Khanna sidaax ayuu ku xijaabtay, wuxuuna dunida kaga tegey magac, caruur, maal, sharaf iyo jaceyl ay dad weynaha oodhan ay jeclaayen.
maadama uu kamdi ahaa xidigaha fanka India maqaamka sare gaarsiyen sido kalena qaab jiliin cajiib ah soojidasho dheeri ah iyo qurux uu xidigaan lahaa.
Waxaa Aqrisay 867